Tsy amin’ny fahatongavan’ny papa ihany: mitohy hatrany ny fisafoana ireo faritra mena ataon’ny Tafika | NewsMada
Tsy amin’ny fahatongavan’ny papa ihany: mitohy hatrany ny fisafoana ireo faritra mena ataon’ny Tafika
Par Taratra sur 03/09/2019
Nanao hetsika fisafoana ireo faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana eto an-dRenivohitra ny Tafika malagasy. ”Tsy amin’izao fahatongavan’ny papa François izao ihany ny hanaovana izany”, hoy ny kaomandin’ny hery vonjitaitran’ny eo anivon’ny Tafika malagasy (Comfia), ny Kly Rakotoson Jocelyn.
“Volana maromaro ny efa nanombohan’ny fisafoana nataon’ny Tafika amin’ny alalan’ny ireo Patrouilles militaire (PM) manerana ny Renivohitra miaraka amin’ireo namana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena. Tsy amin’izao fahatongavan’ny papa ray masina ihany akory ny anaovana izao fa mitohy hatrany ary ho fanamafisana ny ezaka efa nataon’ny Tafika malagasy hatramin’izay”, hoy ny fanazavan’ny Comfia, omaly alina nandritra ity hetsika fisafoana ity. Niaraka nanao ity fisafoana omaly ity ny eo lefitra voalohan’ny Comfia, ny Kly Raharison Patrick, ny lefitra faharoan’ny Comfia, ny Kly Heritiana, ny kaomandin’ny aro ana habakabaka (R3A), ny Kly Raharijaona Faly, ny kaomandin’ny Rezimantan’ny Andry sy Tohana (RAS), ny Kly Ranaivoson José, ary ny kaomandin’ny tafondro mavesatra eny Imerintsiantosika, ny Kly Vahinisoa. Nisy ny fankaherezana ireo miaramila manao PM, eo ambany fiadidian’ireto lehibeny isan’ambaratongany ireto. Nohamafisin’izy ireo fa miaina ao anatin’ny vahoaka izy ireo koa aza misalasala ny manatona ireny miaramila manao PM ireny raha misy zavatra ilàna famonjena. Ho an’ireo miaramila PM misahana ny vakim-paritra amin’ny faritra Andraharo iny, efa maro ireo olona tonga manatona mila famonjena azy ireo. “Misambotra avy hatrany izahay ary manolotra ireo olona ahiahina ho olon-dratsy ny polisim-pirenena”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ireo miaramila manao PM.
Misy amin’ireo “bar” no tsy mety hikatona…
Toy izany koa ny eny amin’ny faritr’i 67 ha, manao fanentanana ireo toeram-pivarotana zava-pisotro misy alikaola (bar) ny miaramila fa olana matetika ny fisian’ireo “bar” sasany tsy mety hikatona amin’ny ora voatondron’ny lalàna tokony hikatonany (amin’ny 9 ora alina). Lazain’ireo “bar” sasany fa manana ny sokajiny izy ireo ka misy ireo “bar” tsy voatery hikatona amin’ny 9 ora alina. Nanamafy kosa anefa ny kaomandin’ny R3A fa mba ho fitandroana ny fandriampahalemana, tsy maintsy mikatona amin’ny 9 ora alina izy ireo ary tsy maintsy manaraka izany ireo mpivarotra. Mbola hitohy, araka izany, ity hetsika ataon’ny Tafika malagasy amin’ny fitandroana filaminana manerana ny Renivohitra ity. Azo lazaina fa efa mihena ny trangana tsy fandriampahalemana noho ny fisian’ireo mpitandro filaminana manao fisafoana ary ao anatin’ny velirano apetraky ny filoha Rajoelina rahateo ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana na an-drenivohitra izany na ambanivohitra.